iTunes Radio VS Pandora, nke nwere An Edge N'ime Ndị ọzọ
> Resource> iTunes> Olee otú iji Họrọ si iTunes Radio na Pandora
Na-adịbeghị anya inyefe nke iTunes Radio ọnụ na iOS 7 na September 18, ọ na-a oké njọ osompi ka jupụtara ebe nile internet redio ozi-Pandora, mgbe ọ kọrọ na nde mmadụ 11 ntị iTunes Radio n'oge mbụ ya igba egbe izu. Ọ na-nụrụ kepu kepu na iTunes Radio ga-agbasakwa nku ya ná mba ndị ọzọ dị ka UK na Canada ná mmalite 2014, nke Pandora bụghị ẹka akara nke.
N'agbanyeghị otú ihe ịga nke ọma abụọ a ọrụ bụ na ihe ambitions ha nwere, ihe music hụrụ n'ikpeazụ na-eche banyere na-anụ songs ha bụ n'ime. Yiri nnọọ ọrụ dị ka iTunes Radio na Pandora dị, ha dị iche ruo n'ókè ụfọdụ. Ya mere nke onye nwere onu n'elu ndị ọzọ? N'ihi na ndị na-amaghị otú ịhọrọ site na ha abụọ, na-eso anyị aka ịhụ tụnyere n'okpuru.
Ị nwere nsogbu ị na-ahọrọ a kwesịrị ekwesị ọrụ maka onwe gị ugbu a? ITunes Radio efu na-erughị na nwere ibu music n'ọbá akwụkwọ. Ọ bụ na-ike na Siri n'ihi na mma ahụmahụ. Mgbe Pandora akwado ọzọ ngwaọrụ ndị ọzọ karịa Apple ngwaọrụ na ya wee mara ihe banyere ihe ị na-n'ime dabere na ya elu technology. N'ihi ya, ọ bụ ihe niile unu ka họrọ otu mgbe ha abụọ nwere oké kpọkwara ị itinye ukwuu mkpa ka.
Cheta na: Mgbe ị họọrọ otu ọrụ na mgbe ige ntị na ya, ị nwere ike a ọhụrụ chọrọ ibudata ma ọ bụ idekọ music si iTunes Radio ma ọ bụ Pandora. Echegbula na ị ga-ya. The Wondershare Streaming Audio Recorder bụ oké ngwá ọrụ na-enyere gị ka ịdekọ music si nile di iche iche nke music saịtị gụnyere iTunes Radio na Pandora. Ọ dere ụda kpọmkwem site na kọmputa gị otú ihe ị na-anụ bụ ihe ị ga-esi. Download ya si n'okpuru na-enye ya a laa.